Ogba mbata: Nhazi oge nke Web | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 26, 2013 Douglas Karr
Ebuka na-enye ndị ahịa ohere itinye akparamagwa nchịkọta nyochaa na ebe nrụọrụ weebụ gị wee mepụta ma bido ahụmịhe onye ọrụ nkeonwe dabere na nsonaazụ ya. Usoro ha na-enye gị ohere ịbawanye ntụgharị site na iduzi ndị ahịa, na-akwalite ndị ahịa, na-akwalite okwu ọnụ site na ịhazi ọdịnaya dị na saịtị gị.
Emezuru nke a na-enweghị mmemme ebe ọ bụ na Evergage nwere Visual Editor, na-enye ohere mbido na mgbanwe dị mfe. Ebuka awade 5 ụzọ dị iche iche hazie ọdịnaya na dịkwuo njikọ aka gị ọbịa gụnyere ma ala, inline ọdịnaya na ike, triggered ozi:
N'ahịrị - Gbanwee ihe ọ bụla
na weebụsaịtị gị na ọdịnaya ezubere iche.
Ogwe Ama - Dụgharịa ndị ọbịa na ọdịnaya echekwara na nkụnye eji isi mee ma ọ bụ okpuru ala.
popup - Were oge achọrọ, wepụta oge popup dị mkpa.
Kpọpụta oku - Duzie ndị ọbịa gaa na ahụmịhe na-aga nke ọma site na iji ngwa ọrụ dị ike.
Ndepụta Ọrụ - Mbanye aka na ndepụta nlele dị ike nke omume maka ndị ọbịa.
Ebuka nwere njikọta na-enweghị ntụpọ na Salesforce, SugarCRM, WordPress, force.com, Drupal, Wistia, na Unbounce. Ihe ngwakọta nke Zapier na-abịa n'isi nso!
Tags: ezubere iche maka omumeDrupalike ọdịnayannyefeike.comkeonweọdịnaya ọdịnayandị ahịaSugarCRMadịghị amaọdịnaya weebụNhazi webamamiheWordPressike
Jolly Smith kwuru
Dec 2, 2013 na 1:04 PM
Nke a dị ezigbo mkpa ederede & vidiyo maka ịmalite ahụmịhe onye ọrụ.
site na codingbrains dot com
ntanetị n'ịntanetị Rochester ny
Dee 5, 2013 na 5: 26 AM
Akwa post ……… mma ịkekọrịta.